မိနဈနှဈဆယျခနျ့ နံရံမှာ ခွထေောကျမွောကျထားရုံနဲ့ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူး (၅) ခကျြ
HomeKnowledgeမိနဈနှဈဆယျခနျ့ နံရံမှာ ခွထေောကျမွောကျထားရုံနဲ့ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူး (၅) ခကျြ
H July 09, 2021
လူအမြားစု ကနျြးမာရေးအတှကျ လကေ့ငျြခနျးတှကေို အားတှေ၊ အခြိနျတှေ အမြားကွီး ပေးပွီး ပွုလုပျကွပါတယျ။ အခြိနျတှေ အမြားကွီး မပေးနိုငျတဲ့ သူတှအေတှကျ တဈနကေို့ မိနဈ 20 ခနျ့ အခြိနျပေးရုံနဲ့ ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး တခု ရှိပါတယျ။
1. နံရံတဈခုမှာ ခွထေောကျကို သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈမယျ့အနေ အထားနဲ့ မွောကျလိုကျပါ။ ကြောအောကျမှာ ခေါငျးအုံးတဈလုံး ထားဖို့တော့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
2. ခွထေောကျကို နံရံပျေါမှာ မွောကျထားတဲ့ အခြိနျမှာ လကျနှဈဖကျကို ခန်ဓာကိုယျနဲ့ အပွိုငျ အနအေထားမှာ ခထြားပေးရုံ ပါပဲ။
3. ဒီပုံစံအတိုငျး 15 မိနဈ ကနေ မိနဈ 20 ကွာအောငျ နပေါ။
ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျတဲ့အခါ အဝတျအစားတှကေ အရမျး မကွပျနဖေို့ လိုပါတယျ။ အဝတျအစားတှေ အရမျးကွပျနတေဲ့ အခါ သှေးလညျပတျမှုကို အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစပေါတယျ။ ပှပှခြောငျခြောငျအဝတျအစားက သငျ့တျောပါတယျ။
မလှုပျမယှကျဘဲ မိနဈ 20 ခနျ့ ခွထေောကျ မွောကျထားခွငျးက ပုံမှနျ လကေ့ငျြ့ခနျးတှနေဲ့ မတူဘဲ ယောဂလကေ့ငျြ့ခနျးနဲ့ ပိုပွီး တူပါတယျ။ အဓိက အကြိုးကြေးဇူးကတော့ သှေးလညျပတျမှု စနဈ ကောငျးလာတာပါပဲ။ ခွထေောကျနဲ့ ကြောရိုးမှာ မကွာသေးခငျကမှ ထိခိုကျထားသူတှေ၊ ခွထေောကျနဲ့ကြောရိုးမှာ နာတာရှညျထိခိုကျဒဏျရာရှိသူတှကေတော့ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို မပွုလုပျသငျ့ပါဘူး။
နံရံပျေါမှာ ခွထေောကျမွောကျထားတဲ့အခါ ခွထေောကျက နံရံနဲ့ အရမျးမဝေးသငျ့သလို အရမျးလညျး မနီးစရေပါဘူး။ နံရံနဲ့ အရမျးနီး၊ အရမျးဝေးတဲ့အခါ ကွှကျသားတှေ တငျးမာလာတတျပွီး ကြောရိုးလညျး နာလာမှာပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနမေိ့နဈ 20 ခနျ့ အခြိနျပေးတဲ့ အခါ
1. ခွထေောကျမှာ လေးလံသလို ခံစားနရေတာ ပြောကျကငျးသှားပါတယျ။
ခွထေောကျမှာ သှေးလညျပတျမှု မကောငျးတဲ့အခါ ခွထေောကျရောငျတာနဲ့ လေးလံတာ ဖွဈတတျပါတယျ။ နှလုံးနဲ့ကြောကျကပျမှာ တဈခုခု ခြှတျယှငျးတာ၊ ကိုယျအလေးခြိနျမြားတာ၊ အစားအသောကျမှားတဲ့အခါမှာလညျး ခွထေောကျ လေးလံတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို ပုံမှနျလုပျပေးနရေငျတော့ ခွထေောကျလေးလံတာ၊ ရောငျတာတှကေို စိတျပူစရာ မလိုတော့ ပါဘူး။
2. ဖိနပျအမွငျ့တှစေီးတဲ့အခါ မနာကငျြတော့ပါဘူး။
ဖိနပျအမွငျ့မကွိုကျတဲ့ အမြိုးသမီး ဆိုတာ ခပျရှားရှားပါပဲ။ ဖိနပျအမွငျ့ကို အမွဲတမျးစီးတဲ့သူ ဆိုရငျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျလာ နိုငျပါတယျ။ ကိုယျအလေးအခြိနျ မြားသူတှကေ ဖိနပျအမွငျ့ စီးတဲ့အခါ အခကျတှပေ့ါတယျ။ တဈနကေုနျ ဖိနပျအမွငျ့ စီးပွီးတဲ့ အခါ မိနဈ 20 လောကျ နံရံမှာ ခွထေောကျမွောကျထားလိုကျပါ။ ခွထေောကျမွောကျပွီးတဲ့ အခါမှာ ခွထေောကျကို နှိပျနယျပေးပွီး ရနှေေးနဲ့ လညျး ရခြေိုးပေးလို့ ရပါတယျ။
3. အစာခစြေနဈ ကောငျးမှနျလာ ပါတယျ။
ခွထေောကျကို နံရံပျေါမှာ မွောကျထားခွငျးက အစာအိမျရဲ့ အလုပျတှကေို တိုးတကျစေ ပါတယျ။ကိုယျတှငျးအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးတှဆေီကို သှေးတှေ ပို့ဆောငျပေး တာလညျး လှယျကူ သှားပါတယျ။ အစာခရြောမှာ လိုအပျတဲ့ လှုပျရှားမှုပွုပေးရတဲ့ ကွှကျသားတှေ အတှကျလညျး ကောငျးသှား ပါတယျ။ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို လုပျပေးတဲ့ အခါမှာ စားလိုကျတဲ့ အာဟာရတှကေို မွနျမွနျ စုပျယူနိုငျမှာပါ။
4. စိတျဖိစီးမှုတှေ နညျးလာပါတယျ။
ခွထေောကျကို နံရံပျေါမှာ မွောကျထားတဲ့ အခြိနျမှာ အသကျရှုတဲ့ အခါ လပေိုပွီး ရပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲက တဈရှူးတှကေ အောကျဆီဂငျြတှေ ပိုရပွီး သှေးလညျပတျမှုလညျး ကောငျးလာ ပါတယျ။ အာရုံကွော အဖှဲ့အစညျးအတှကျ အကြိုးရှိပွီး နားထငျနဲ့ လညျပငျးက ကွှကျသှားတှေ တငျးမာမှုကို လြှော့ပွီးသားလညျး ဖွဈစေ ပါတယျ။
5. နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောစပေါတယျ။
ခွထေောကျနာတဲ့ အခါ၊ ခွထေောကျ အပူလောငျတဲ့ အခါ၊ ခွထေောကျရောငျတဲ့ အခါမှာ အိပျမပြျောခွငျးက ရောကျလာပါတယျ။ ခွထေောကျကို မွောကျထားတဲ့ အခါ ဦးနှောကျက အောကျဆီဂငျြကို ပိုရလာပါတယျ။ သှေးလညျပတျမှုလညျး ကောငျးလာပါတယျ။ ခွထေောကျကို နံရံမှာ မွောကျထားပွီး ငွိမျငွိမျနခွေငျး ကလညျး စိတျကို တညျငွိမျစေ ပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ မအိပျခငျ မှာလညျး ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့် နံရံမှာ ခြေထောက်မြောက်ထားရုံနဲ့ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၅) ချက်
လူအများစု ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင်ခန်းတွေကို အားတွေ၊ အချိန်တွေ အများကြီး ပေးပြီး ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အချိန်တွေ အများကြီး မပေးနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် တစ်နေ့ကို မိနစ် 20 ခန့် အချိန်ပေးရုံနဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း တခု ရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း တခု ရှိပါတယ်။
1. နံရံတစ်ခုမှာ ခြေထောက်ကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်မယ့်အနေ အထားနဲ့ မြောက်လိုက်ပါ။ ကျောအောက်မှာ ခေါင်းအုံးတစ်လုံး ထားဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
2. ခြေထောက်ကို နံရံပေါ်မှာ မြောက်ထားတဲ့ အချိန်မှာ လက်နှစ်ဖက်ကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အပြိုင် အနေအထားမှာ ချထားပေးရုံ ပါပဲ။
3. ဒီပုံစံအတိုင်း 15 မိနစ် ကနေ မိနစ် 20 ကြာအောင် နေပါ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်တဲ့အခါ အဝတ်အစားတွေက အရမ်း မကြပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ အဝတ်အစားတွေ အရမ်းကြပ်နေတဲ့ အခါ သွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ပွပွချောင်ချောင်အဝတ်အစားက သင့်တော်ပါတယ်။
မလှုပ်မယှက်ဘဲ မိနစ် 20 ခန့် ခြေထောက် မြောက်ထားခြင်းက ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ မတူဘဲ ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ ပိုပြီး တူပါတယ်။ အဓိက အကျိုးကျေးဇူးကတော့ သွေးလည်ပတ်မှု စနစ် ကောင်းလာတာပါပဲ။ ခြေထောက်နဲ့ ကျောရိုးမှာ မကြာသေးခင်ကမှ ထိခိုက်ထားသူတွေ၊ ခြေထောက်နဲ့ကျောရိုးမှာ နာတာရှည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူတွေကတော့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
နံရံပေါ်မှာ ခြေထောက်မြောက်ထားတဲ့အခါ ခြေထောက်က နံရံနဲ့ အရမ်းမဝေးသင့်သလို အရမ်းလည်း မနီးစေရပါဘူး။ နံရံနဲ့ အရမ်းနီး၊ အရမ်းဝေးတဲ့အခါ ကြွက်သားတွေ တင်းမာလာတတ်ပြီး ကျောရိုးလည်း နာလာမှာပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့မိနစ် 20 ခန့် အချိန်ပေးတဲ့ အခါ
1. ခြေထောက်မှာ လေးလံသလို ခံစားနေရတာ ပျောက်ကင်းသွားပါတယ်။
ခြေထောက်မှာ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းတဲ့အခါ ခြေထောက်ရောင်တာနဲ့ လေးလံတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နှလုံးနဲ့ကျောက်ကပ်မှာ တစ်ခုခု ချွတ်ယွင်းတာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်များတာ၊ အစားအသောက်မှားတဲ့အခါမှာလည်း ခြေထောက် လေးလံတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ပေးနေရင်တော့ ခြေထောက်လေးလံတာ၊ ရောင်တာတွေကို စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ ပါဘူး။
2. ဖိနပ်အမြင့်တွေစီးတဲ့အခါ မနာကျင်တော့ပါဘူး။
ဖိနပ်အမြင့်မကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုတာ ခပ်ရှားရှားပါပဲ။ ဖိနပ်အမြင့်ကို အမြဲတမ်းစီးတဲ့သူ ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာ နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးအချိန် များသူတွေက ဖိနပ်အမြင့် စီးတဲ့အခါ အခက်တွေ့ပါတယ်။ တစ်နေကုန် ဖိနပ်အမြင့် စီးပြီးတဲ့ အခါ မိနစ် 20 လောက် နံရံမှာ ခြေထောက်မြောက်ထားလိုက်ပါ။ ခြေထောက်မြောက်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ခြေထောက်ကို နှိပ်နယ်ပေးပြီး ရေနွေးနဲ့ လည်း ရေချိုးပေးလို့ ရပါတယ်။
3. အစာချေစနစ် ကောင်းမွန်လ ပါတယ်။
ခြေထောက်ကို နံရံပေါ်မှာ မြောက်ထားခြင်းက အစာအိမ်ရဲ့ အလုပ်တွေကို တိုးတက်စေ ပါတယ်။ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို သွေးတွေ ပို့ဆောင်ပေး တာလည်း လွယ်ကူ သွားပါတယ်။ အစာချေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုပြုပေးရတဲ့ ကြွက်သားတွေ အတွက်လည်း ကောင်းသွား ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပေးတဲ့ အခါမှာ စားလိုက်တဲ့ အာဟာရတွေကို မြန်မြန် စုပ်ယူနိုင်မှာပါ။
4. စိတ်ဖိစီးမှုတွေ နည်းလာပါတယ်။
ခြေထောက်ကို နံရံပေါ်မှာ မြောက်ထားတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ရှုတဲ့ အခါ လေပိုပြီး ရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက တစ်ရှူးတွေက အောက်ဆီဂျင်တွေ ပိုရပြီး သွေးလည်ပတ်မှုလည်း ကောင်းလာ ပါတယ်။ အာရုံကြော အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိပြီး နားထင်နဲ့ လည်ပင်းက ကြွက်သွားတွေ တင်းမာမှုကို လျှော့ပြီးသားလည်း ဖြစ်စေ ပါတယ်။
5. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
ခြေထောက်နာတဲ့ အခါ၊ ခြေထောက် အပူလောင်တဲ့ အခါ၊ ခြေထောက်ရောင်တဲ့ အခါမှာ အိပ်မပျော်ခြင်းက ရောက်လာပါတယ်။ ခြေထောက်ကို မြောက်ထားတဲ့ အခါ ဦးနှောက်က အောက်ဆီဂျင်ကို ပိုရလာပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုလည်း ကောင်းလာပါတယ်။ ခြေထောက်ကို နံရံမှာ မြောက်ထားပြီး ငြိမ်ငြိမ်နေခြင်း ကလည်း စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေ ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် မအိပ်ခင် မှာလည်း ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။